အဖွဲ့ဝင်အင်တာဗျူး Archives | TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd
Kaho Taniguchi（Legal Consultant On 17. 2. 2020）
Q1. Why did you decide to work at our company? The reason is I want to tryanew challenge, which is law farm. And my university major was Japanese Law. also, I want to […]
မခိုင်ခိုင်နွဲ့တင် (ရှေ့နေအဖြစ် ၂၄.၀၆.၂၀၁၉ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ ကျွန်မသည် ဂျပန်ဘာသာစကားကို အထူးစိတ်ဝင်စားပြီး လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် လူသိများသော ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Law Firm တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မအနေဖြင့် ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ခြင်းက အတွေ့အကြုံကောင်းများနဲ့အတူ ကျွန်မရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ၊ ဘာသာစကား ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများ ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် အလုပ်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သင်နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ […]
မောင်ဇင်ဝင်းထက် (စီမံရေးရာအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ၆၀.၀၅.၂၀၁၉ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ TNY Legal Myanmar Company သည် ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက်ဥပဒဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသည်မှာ ၄ နှစ်တာကာလရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ရုံးခွဲများရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်မှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် နယ်အသီးသီးမှ ဥပဒေ နှင့်ပတ်သတ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေ့လာချင်သော လည်းကောင်း ကျွန်တော်၏ ဂျပန်စကားအရည်အသွေးတိုးတက်ချင်သေလည်းကောင်း ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
မချောသဉ္ဇာလွင် (စီမံရေးရာအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ၆၀.၀၅.၂၀၁၉ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ TNY Legal Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျော်ကြားသော Law Firm တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရသည့်အတွက် ကျွန်မ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။ ကျွန်မက လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်ရေးနဲ့ ကျွန်မရဲ့လုပ်ငန်းရေးရာ တိုးတက်ရေး အတွက် ပိုပြီး စိန်ခေါ်မှုများတဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံရရှိချင်တာကြောင့် Administrative Secretary နေရာဖြင့် ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
မနှင်းဦးေ၀ (ဘာသာပြန်အဖြစ် ၂၂.၀၄.၂၀၁၉ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ Legal Translator ခေါ်ထားတဲ့အလုပ်ကို ကြားလိုက်ရခြင်းက ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံ အသစ်တွေရှာဖွေဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုက ကျွန်မရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းကို အများကြီးတိုးတက်လာစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ၂။ သင်နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ နယ်ပယ်တော်တော်များများမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာပြန်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါ တယ်။ အဲ့ဒီထက် အခုအလုပ်မှာအများကြီး အထောက်အကူပြုနိုင်အောင် Legal Translating အပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်ချင်ပါတယ်။ ၃။ သင်ရဲ့အားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလေ့ရှိသလဲ။ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတာသဘောကျပြီး […]
မအေးငြိမ်းနိုင် (ရှေ့နေအဖြစ် ၀၁.၁၁.၂၀၁၈ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ ကျွန်မရဲ့အိပ်မက်တစ်ခုက နိုင်ငံခြားဥပဒေရေးရာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ရဖို့နဲ့ နိုင်ငံခြားသားရှေ့နေတွေနဲ့ အလုပ်တူတူလုပ်ခွင့်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ ဥပဒေရေးရာနယ်ပယ်အသစ်တွေကိုလေ့လာချင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်မရဲ့သိထား တဲ့အသိပညာတွေကို အသုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ SAGA ASIA ကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ကြားသိရတဲ့အတွက် ကြောင့် SAGA ASIA မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သင်နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာ ကျွန်မက ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေတစ်ယောက် […]
မအိဖြိုးမွန် (ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ၁၁.၀၆.၂၀၁၈ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ ကျွန်မဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းကို ဖတ်ရတဲ့အခါမှာ အလုပ်သင်အတွင်းရေးမှူးနဲ့ စကားပြန်ဆိုပြီး အလုပ်ရာထူး ၂ ခုလစ်လပ်နေတာ ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအဲ့ဒီ ရာထူးနှစ်ခုလုံးကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ၂။ သင်နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ ကျွန်မက နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုလည်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ၃။ သင်ရဲ့အားလပ်ရလက်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလေ့ရှိသလဲ။ ကျွန်မရဲ့အားလပ်ရက်တွေမှာ စာဖတ်တာနဲ့ […]
Ikuko Yokomizo (Administrative Scrivener on 01. 06. 2018)
1. Why did you decide to work at our company? I came to Myanmar in 2014. At that time, just before the administration changed, Myanmar was about to become new in politics, economy, etc. So, […]
မယဉ်ယဉ်ဝင့် (ဘာသာပြန်နှင့် အကြံပေးအချစ် ၀၅.၀၃.၂၀၁၈ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ ဒီကုမ္ပဏီက ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မက ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသိချင်ပါတယ်။ ၂။ သင်နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ နောက်လာမဲ့အနာဂတ်မှာ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တည်ထောင်ချင်ပါတယ်။ ၃။ သင်ရဲ့အားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလေ့ရှိသလဲ။ အားလပ်ရက်တွေမှာ စာဖတ်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်များကြည့်တာ၊ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းစားတာ စတာတွေကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၄။ သင်ရဲ့ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်တတ်တာ၊ အချိန်ကို ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲတတ်တာ၊ သင်ယူချင်စိတ်ရှိတာနဲ့ […]
ဇွန်မီနိုင် (လက်ထောက်စီမံရေးအဖြစ် ၁၇.၀၇.၂၀၁၇ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ ကျွန်မက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရချင်တာကြောင့်နဲ့ နေရာသစ်မှာ သင်ယူလေ့လာချင်တာကြောင့် အလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ၂။ သင်နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာ ကျွန်မက စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့နေတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ၃။ သင်ရဲ့အားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလေ့ရှိသလဲ။ ကျွန်မရဲ့အားလပ်ရက်တွေမှာ စာဖတ်တာ၊ အိပ်တာ၊ ခရီးသွားတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့တွေ့တာမျိုးလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၄။ သင်ရဲ့ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ကျွန်မရဲ့အားသာချက်ကတော့ နေရာသစ်တွေမှာ စူစမ်းလေ့လာရတာ၊ […]
မဆုရည်မွန်နိုင် (ဘာသာပြန်အဖြစ် ၀၆.၀၃.၂၀၁၇ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ သင်ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါလဲ။ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်များကို သင်ယူလေ့လာချင်တာကြောင့် ကျွန်မ TNY Legal Myanmar Company အလုပ်ဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သင်နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ ကျွန်မက နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာပြန်နဲ့ သင်တန်းနည်းပြတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားများစွမှာလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်လာအောင် အာရုံစိုက် နှစ်မြှုပ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေကို ရယူနိုင်ရန် များစွာကူညီနိုင်မည်ဟု ကျွန်မယုံကြည်သလို ကျွန်မရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုလည်း […]
မသတိုးနေနိုင် (ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ၀၁.၀၄.၂၀၁၅ နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ပါသည်)
၁။ ဒီကုမ္ပဏီမှာသင့်ရဲ့အဓိက အလုပ်တာဝန်က ဘာပါလဲ။ ကျွန်မက ဒီကုမ္ပဏီမှာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ အဓိက တာဝန်တွေကတော့ ဥပဒေအစရှိသည်များအား သုသေတနပြုခြင်းနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အလုပ်လုပ်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့သော အလုပ်ပုံစံများကို သင်ပိုမိုပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ဆောင်လိုပါသလဲ။ တာဝန်ယူမှုနဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို နှစ်သက်တယ်။ Information တွေကို တိကျစွာပေးပို့နိုင်ဖို့ အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ နည်းစနစ်တကျလုပ်ကိုင်မှုနဲ့ တိကျသေချာမှုတွေကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အေးချမ်းတဲ့အလုပ်ခွင်မှာ အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ကိုင်နိုင်တာတွေနဲ့ အတူတူလုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို […]
Momoko Tsutsumi (Legal Consultant 12.02.2015)
Q1. Why did you decide to work at our company? I had come to Myanmar once before working. Myanmar people was very nice and kind to me. Therefore, when MD invited me to founding member […]